Nge-Bay Bungalow, uhambo olufushane oluya e-Cole Park - I-Airbnb
Nge-Bay Bungalow, uhambo olufushane oluya e-Cole Park
I-i-guesthouse ephelele ibungazwe ngu-Larry & Beth
Ngo-259 Mbps, ungashaya izingcingo zevidiyo futhi udlalele lonke iqembu amavidiyo.
U-Larry & Beth Ungumbungazi ovelele
Amabhuloho amafushane amabili nohhafu nje ukusuka e-Christi Beach nase-Bay. Jabulela ukuhambahamba okufushane ukuya e-Cole Park enhle noma uthathe i-Ocean Drive ngohambo olufushane oluya edolobheni. Hamba ngenye indlela ukuya e-Padre Island. Ilungele ukuvakashela isibhedlela nezisebenzi zezokwelapha. Leli yifulethi elithokomele, elizimele le-bungalow, elilungele umuntu oyedwa noma abantu abashadile, elisendaweni enokuthula engokomlando. I-guesthouse yonke enendawo yokungena eyenzelwe izivakashi kuphela, indlu yokugezela ephelele, ikamelo lokulala elilodwa, nendawo yokuhlala, kuhlanganise nekhishi elincane.
Ikhaya lethu lalingelinye lakhiwa okokuqala endaweni ngo-1936. Yakhiwa ngumalume wami, owasithengisa. I-bungalow yaguqulwa yaba yifulethi ukuze ilisebenzise njengoba idinga indawo yezingane zethu lapho ziba intsha. Kamuva sayisebenzisa njengehhovisi, bese siyisebenzisa njengendlu yezivakashi.
I-wifi esheshayo – 259 Mbps
Indawo yangakithi ingenye yezindawo ezizungeze amadolobha amakhulu ezilondolozwe kahle e-Longus Christi. Ikhaya liyingqayizivele futhi liyingqayizivele ngesitayela. Indawo ezungeze amadolobha amakhulu enokuthula futhi ephephile ukuthatha uhambo oluhle oluya e-Bay. Ama-Sunrises mahle kusuka ku-Christi Bay futhi uma uhamba usuka ekhaya uya ogwini, kungamavimba angu-2 1/2 kuphela. Thatha umzila uzungeze ipaki bese ubuya futhi konke ukuhamba cishe amamayela angu-3.
Ibungazwe ngu-Larry & Beth
Mina nomyeni wami siyisithandani esithathe umhlalaphansi esithulile futhi sihlala endlini enkulu. Sizohlonipha ubumfihlo bakho kodwa uma sisekhaya, nathi siyatholakala ukuvakashela noma ukusiza nganoma yini ongayidinga. Uma ufika, ungaya ngqo kwi-bungalow. Asikho isidingo sokungena nathi kuqala. Sizovula i-bunglow ngaphambi nje kokuthi silindele ukuthi ufike. Ukhiye owengeziwe ungaphakathi ukuze uwusebenzise.
Mina nomyeni wami siyisithandani esithathe umhlalaphansi esithulile futhi sihlala endlini enkulu. Sizohlonipha ubumfihlo bakho kodwa uma sisekhaya, nathi siyatholakala ukuvakashela…
ULarry & Beth Ungumbungazi ovelele